महराले वक्तव्यमा जोड दिएको 'देशभक्त' र 'राष्ट्रिय स्वाधिनता'को संकेत
काठमाडौं, ५ फागुन । निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महराले सोमबार जेलमुक्त भएपछि एक विज्ञप्ति जारी गरे । ‘सम्माननीय’ सभामुख पदबाट राजीनामा दिएका महराले ‘माननीय’ प्रतिनिधिसभा सदस्यको रुपमा वक्तव्य जारी गरेका हुन् ।
वक्तव्यमा ३० दिन प्रहरी हिरासत र १०३ दिन डिल्लीबजार कारागारमा बसी तथाकथित आरोप खेपेको उल्लेख गर्दै यसबीचमा सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिएका छन् । साथसाथै उनको वक्त्वयमा अटाएको दुई वाक्य यस्तो छ- ‘एक देशभक्त नेपालीका रुपमा मुलुकको स्वाधिनताको रक्षा मेरो पहिलो र उच्च प्राथमिकतामा सधैं थियो, छ र रहिरहनेछ । नेपालको राष्ट्रिय स्वाधिनता र नेपालीको स्वतन्त्रता इतिहासदेखि नै गौरवपूर्ण रहेको छ र रहिरहनेछ ।’
वक्तव्यमा उनले आफूलाई एक देशभक्त नेपालीको रुपमा प्रस्तुत गरेका छन् । उनले मुलुकको स्वाधिनताको रक्षा आफ्नो पहिलो र उच्च प्राथमिकतामा रहिरहने उल्लेख गरेका छन् ।
उनी डिल्लीबजार कारागारबाट जेलमुक्त हुनेक्रममा उनका समर्थकहरुले ‘एमसीसी मुर्दावाद’को नारा लगाएका थिए । महरा हिरासतमा रहेको बेला प्रधानमन्त्री केपी ओलीले महराले एमसीसीमा आफूलाई असहयोग गरेर गल्ती गरेको आशयको अन्तर्वार्ता दिएका थिए ।
देशमा जब एमसीसीको बहस र विवाद चर्को बन्दै गयो, तब महराप्रति सहानुभूति व्यक्त गर्नेहरुको संख्या र घनत्व बढ्न थाल्यो ।
महराले वक्तव्यमा आफूलाई एमसीसीप्रति सकरात्मक नभएकै कारण फसाइएको भनेर स्पष्टरुपमा नभने पनि उनले प्रयोग गरेका शब्दहरुले यसैलाई संकेत गरेको छ ।
यता महराआवद्ध नेकपाभित्र प्रधानमन्त्री ओली र उनका समर्थकहरु एमसीसी पारित गर्न प्रतिवद्ध रहे पनि एमसीसीविरुद्ध मत बलियो बन्दै गइरहेको छ । यहाँनेर ओलीका लागि एउटा उखान चरितार्थ भइरहेको छ, ‘आफू ताक्छु मुढो, बञ्चरो ताक्छ घुँडो ।’
के छ महराको वक्तव्यमा ?
अन्ततः ममाथि लगाइएको आरोप गलत सावित भएको छ । सम्मानित अदालतले मलाई निर्दोष ठहर गर्दै सफाई दिएको छ । म सम्मानित अदालतप्रति विशेष आभार एवं धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । यस क्रममा सक्रियतापूर्वक पहल र सहयोग गर्ने मेरो परिवारका सम्पूर्ण सदस्यहरु, मित्रहरु, मेरो पक्षमा वकालत गर्ने
कानुन व्यवसायीहरु र राजनैतिक व्यक्तित्वहरुप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु ।
म ३० दिन प्रहरी हिरासत र १०३ दिन डिल्लीबजार कारागारमा बसी तथाकथित आरोप खेपेको छु । यस अवधिमा मलाई सद्भाव र सहानुभुति दिनुहुने मेरा
समर्थकहरु, शुभचिन्तकहरु, अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी मित्रहरु, प्रहरी मित्रहरु र डिल्लीबजार कारागारका सम्पूर्ण बन्दी साथीहरुलाई हार्दिक आभारसहित धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
एक देशभक्त नेपालीका रुपमा मुलुकको स्वाधिनताको रक्षा मेरो पहिलो र उच्च प्राथमिकतामा सधैं थियो, छ र रहिरहनेछ । नेपालको राष्ट्रिय स्वाधिनता र नेपालीको स्वतन्त्रता इतिहासदेखिनै गौरवपूर्ण रहेको छ र रहिरहनेछ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य, दाङ–२
मिति २०७६ फागुन ५ गते
चिकित्सकमाथि दोष थुपार्ने कामले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई गिज्याईरहेको छः नेपाल चिकित्सक संघ
वाइडबडी जहाज बेलायत, जर्मनी र क्यानाडा उड्दै
बहराइनमा ९ र भारतमा १ नेपालीमा कोरोना संक्रमण भेटियो
अदालतको अति आवश्यक सेवा चैत २८ सम्म सञ्चालन हुने
कोरोना संक्रमणको रोकथामः नेपालसहित १९३ देशको १० बुँदे संयुक्त अपिल
कोरोनाविरुद्ध नेपाल सरकारको कामलाई संसारले प्रशंसा गरिरहेछः राष्ट्रपति भण्डारी
पोखरामा कसैलाई कोरोना संक्रमण देखिएको छैनः स्वास्थ्य मन्त्रालय (भिडियोसहित)
वर्तमान सरकारका कारण तीन करोड नेपालीको ज्यान खतरामा छः डा. भट्टराई
धार्मिकसभामा भाग लिन आएका १३ जना इण्डोनेशियाली नागरिक फर्काइए